Izindaba - Uyini Umlando Wokuthuthuka Wokuphonsa Okuqondile?
Uyini Umlando Wokuthuthuka Wokuphonsa Okuqondile?
Precision thusi kuhlanganisa utshalomali thusi, bobumba isikhunta thusi, metal isikhunta thusi, ingcindezi thusi futhi EPC.
Ukutshalwa kwezimali, okwaziwa nangokuthi i-wax loss casting, kuvame ukusetshenziswa: izinto zokukhipha utshalomali ezifanele (ezifana nophalafini) zikhethwa ukwenza isikhunta sokutshala imali; Phinda izinyathelo zokudipha kokumboza okukhanyelayo nokufafaza isihlabathi esikhombisayo kusikhunta sokutshala imali, ukwenza lukhuni igobolondo nokomisa; Bese uncibilikisa isikhunta sangaphakathi sokutshala imali ukuthola umgodi; Bhaka igobolondo lesikhunta ukuthola amandla anele futhi ushise okusalile kwesikhunta sokutshala imali; Izinto zensimbi ezidingekayo ukuthela; Ukuqinisa ukupholisa nokuhlanza isihlabathi ngemuva kokuthwebula, ukuze uthole imikhiqizo eqediwe ngokunemba okuphezulu. Ukwelashwa ngokushisa, ukusebenza okubandayo nokwelashwa kwendawo kuzokwenziwa ngokuya ngezidingo zomkhiqizo. Precision thusi yigama elijwayelekile lenqubo yokusakaza ukuthola ubukhulu obunembile. Uma kuqhathaniswa nenqubo yendabuko yokuphonsa isihlabathi, usayizi wokulingisa otholwe ngokunemba kokuphonsa kunembile futhi ubuso bushelelezi.
Precision thusi ubizwa nangokuthi wax wax thusi. Imikhiqizo yayo yinhle futhi iyinkimbinkimbi, isondele ekubunjweni kokugcina kwezingxenye, futhi ingasetshenziswa ngqo ngaphandle kokucutshungulwa noma inani elincane lokucutshungulwa. It is a advanced advanced net shape ukwakha ubuchwepheshe. Kuthiwani ngomlando wayo?
Ezikhathini zasendulo, i-Ziwu tripod, ukuvinjelwa kwethusi kanye nebhubesi lethusi konke kwakuyizinto zobuciko zokuncibilika nokuphosa. Kusukela ngawo-1940, ukusakazwa kokutshalwa kwemali kusetshenzisiwe ekukhiqizweni kwezimboni, futhi bekuthuthuka ngokushesha okwekhulu leminyaka. Ikakhulukazi ukuthuthukiswa okusheshayo kwamazwe aseYurophu nawaseMelika. Ngaphandle kwezindiza nezikhali, ukukhishwa kotshalo-mali kusebenza cishe kuyo yonke imikhakha yezimboni, ikakhulukazi i-elekthronikhi, uphethiloli, imboni yamakhemikhali, amandla, ezokuthutha, imboni elula, indwangu, ezokwelapha, okokusebenza kwezokwelapha, amaphampu namavalvu. Eminyakeni yamuva nje, umnotho waseChina uthuthuke ngokushesha.
Nge ukuthuthukiswa utshalomali thusi ubuchwepheshe, utshalomali thusi angakhiqiza castings ezincane kuphela, kodwa futhi castings ezinkulu. Ubukhulu bayo sebusondele ku-2m ukuphakama, kepha ubukhulu bodonga obuncane abudluli ku-2m. Ngasikhathi sinye, ukusatshalaliswa kwezimali sekucacile kakhulu. Ngaphezu kokubekezelelana okuqondile, bangaphinde bafeze ukubekezelelana okuphezulu kwejometri. Ubulukhuni bendawo yokutshalwa kwemali buba buncane futhi bube buncane, Ingafinyelela kuRa0.4 μ m.
Isikhathi Iposi: Sep-26-2021